मध्यपहाडी लोकमार्ग साढे छ घण्टा बन्द हुने !
पर्वत, निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग दैनिक साढे छ घण्टा बन्द हुने भएको छ ।
सडक विस्तारका लागि पर्वत र कास्कीको सिमाना नयाँ पुलदेखि कुश्मा नगरपालिका–१ अर्मादीसम्मको खण्डमा बुधबारदेखि दैनिक साढे छ घण्टा बन्द गर्ने निर्णय भएको हो । बिहान १० बजेदेखि अपराह्न साढे २ बजेसम्म र अपराह्न १६ः३० बजेदेखि ७ बजेसम्म सडक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
लोकमार्गको डिमुवादेखि बेतनी बिचको माहुरी भिर, चुवाको भिर र अर्मादीको भिरमा सडक फराकिलो बनाउने काम गर्न सडक बन्द गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । मध्यपहाडी सडक निर्माण आयोजनाअन्तर्गत लामा कन्ट्रक्सन प्रालिले उक्त खण्डमा निर्माणको काम तीव्र पारेको छ । “महभीर, चुवा र अर्मादीको भिरमा सडक फराकिलो बनाउन पहरा कटान गर्नुपर्ने भएकाले दैनिक साढे छ घण्टा सडक बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो”, आयोजना प्रमुख आशिष थापा मगरले भन्नुभयो ।
त्यस्तै महभिरको वैकल्पिक मार्ग बनाउनका लागि मोदी गाउँपालिका र चुवामा वैकल्पिक मार्ग बनाउन कुश्मा नगरपालिका र तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनासँग समन्वय गर्ने तयारीसमेत भएको छ । आयोजनाको पर्वतको प्रवेशद्वारदेखि मालढुङ्गासम्मको २३ दशमलव ७६९ किलोमिटर स्तरोन्नतिको काम लामा कन्ट्रक्सन प्रालिले जिम्मा लिएको छ ।
कम्पनीले रु ८३ करोड ९८ लाखमा सो खण्ड स्तरोन्नतिको कामको ठेक्का लिएको छ । अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत काम सकिएको कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर गोविन्दप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाले ७२ किलोमिटर लामो पोखरा बागलुङ खण्डलाई नयाँ स्वरुपमा ढाल्ने गरी मर्मत सम्भार तीव्र पारिरहेको छ ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, माघ २९, २०७५१९:२५
मेलम्ची आयोजनामा पुरानै ठेकेदार कम्पनी फर्काउन पहल गरिने ! फर्किने सम्भावना कति ?